Kedu ka ị si eme ma e jiri ya tụnyere ndị ahịa 400 ọzọ? | Martech Zone
Kedu ka ị si eme ma e jiri ya tụnyere ndị ahịa 400 ọzọ?
Thursday, August 7, 2014 Fraịde, Ọgọstụ 8, 2014 Douglas Karr
Anyị na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ enweela nzukọ dị ịtụnanya n'oge na-adịbeghị anya. Ha nwere nsogbu niile ị nwere ike iche maka - obere ndị otu, usoro ụlọ ọrụ, aha aka, ecommerce… ọrụ ahụ. Ka oge na-aga, ha esoro ha na obere otu ha nwee ike ịdị na teknụzụ nke na-esiwanye ike ijikwa. Ọrụ anyị bụ ịkọwapụta atụmatụ ha ma kwusi ụgwọ ha site na ịkọwapụta na itinye ego na ntinye mgbanwe. Ọ bụghị ọrụ maka ndị dara mbà n’obi.
Ka anyị na-anọdụ ala na tebụl, ndị otu a na-enwekarị ihere na nkụda mmụọ n'ọtụtụ oghere ndị ha hapụrụ ma ọ bụ enweghị ọsọ ọsọ ịnabata teknụzụ ọhụụ. Ọ dị ka mgbe ọ bụla mụ na ụlọ ọrụ zutere otu ndị otu ha nwere otu ihe a. Ihe ahia ahia bu ihe okomoko na aku na uba ya na ulo oru ekwesighi imechu ha ihu na ha enweghi ike ijide. Industrylọ ọrụ ahụ na-aga ngwa ngwa, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe ọ bụla ikpo okwu na-alụ ọgụ maka dollar ahịa - na-agbagha ọgba aghara nke ndị na-ere ahịa bụ ndị na-adọta n'ụzọ ọ bụla.
Nyere nke ahụ, ọ dị mma mgbe niile -eche dị ka a ga - asị na ị naghị eme oke ihe ọjọọ. Nchoputa oru a sara mbara nke Ektron ga enyere gi aka izu ike… ma eleghi anya o gha eme gi obi uto banyere oganihu i megoro na uzo nke ichoro. Ohere inweta bụ, ị nwere ike ịga n'ihu usoro!
Ektron malitere nnukwu ọrụ nyocha iji ghọtakwuo mgbanwe na usoro dị na Digital Marketing na Marketing Technology maka afọ 2014. Ha jụrụ ndị ahịa, ndị ọkachamara IT, ndị mmepe, na ndị na-ede akwụkwọ ọdịnaya na ụlọ ọrụ gafee ọrụ dị iche iche nghọta ha banyere atụmatụ dijitalụ na usoro. Ndị ọkachamara na 400 na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ dijitalụ nyere echiche ha.
Ihe omuma ahu na-agabiga site na peeji nke ọdịda na ojiji oku na-eme ihe, okike okike, njikarịcha nyocha, nchịkọta, mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ahịa inbound, ịhazi onwe, ịchebe, ahịa mkpanaka, mwekota, nyocha a / b, mmebe weebụ na-anabata yana ma a na-emejuputa ha ugbu a, na-eme atụmatụ itinye ya n'ọrụ, ma ọ bụ na a ga-etinye ha n'ọrụ n'ọdịnihu dị nso. Nkwubi okwu a bu na enwere otutu okwu na afo a ihe okike, ichota na nke onwe.
Tags: ule uleAnalytics-eji oku na-eme ihemmepụta ihectammepedijitalụ gị n'ụlọngammejuputa ahia dijitalụusoro ahia ahiateknụzụ ahịa dijitalụatụmatụ dijitalụektroninbound marketingmwekotaNdị ọkachamara ITmbido peeji nkendị ahịammejuputa ahiamarketing atụmatụteknụzụ ahịaMobile na Mbadamba ụrọahịa efukeonweanabata web designsearch engine njikarịchaSocial Media Marketingezubere iche
Otu anyi si eji aka anyi akwaghari WordPress
Aug 26, 2014 na 5: 27 AM
Ihe omuma ihe di egwu ..